NextMapping | Keynotes: Mustaqbalka Soo Jiidashada & Haynta Xigmada Sare
Isku day Koorso Bilaash ah
Habka NextMapping ™
Dhacdooyinka Live & Dib u Noqoshada
Koorso Khadka Tooska ah ee Cusub
Sida Loo Abuuro loona Cusbooneysiiyo Xawaaraha Isbedelka
Eeg dhammaan Koorsooyinka Mustaqbalka ee Shaqada Internetka
Ilaa Sebtember 30-keeda koorsooyinkayadu 50% way ka dhiman yihiin. hadda iibso
Mustaqbalka Soo Jiidashada & Joojinta Awooda Sare
95% shirkadaha la sahamiyey waxay tilmaamayaan in diirada weyn ee mustaqbalka ay tahay helida iyo haynta kartida sareysa ee da'da farsamada, shaqaalaha fog iyo kordhinta tartamada.
U qor Cheryl si aad uga hadasho dhacdadaada
Isbeddellada, daraasadaha kiisaska, iyo fikradaha hal-abuurka ee ku saabsan shaqaalaysiinta iyo sii wadashada kartida
Madaxa sahanka ee Fortune 500 ee gobolka sahaminta laga sameeyay ayaa sheegay in xitaa marka ay jiraan da'da robotics-ka ay qorsheynayaan inay sii wadaan raadinta iyo shaqaalaynta dadka kartida leh si wanaagsan 2020 iyo wixii ka dambeeya. Tartan loogu jiro soo jiidashada tayada sare ayaa sii kordheysa, isla markaana sida ugu dhakhsaha badan dadka loo shaqaaleysiinayo oo loo tababaray warshado kale ayaa soo dhowaanaya oo ugaarsiga ugaarsiga. Intaa waxaa sii dheer kororka fursadaha iskood u shaqeystayaasha ah iyo ganacsiyada ee kunka sano ah ayaa ka dhigeysa raadinta hibada mid aad u adag.
Shirkaduhu maxay qaban karaan? Maxay u baahan yihiin hogaamiyayaashu inay sameeyaan si ay ugu guuleystaan ​​dagaalka kartida?
Farta muhiimka ah, waxaad ku baran doontaa sida loo khaarijiyo istiraatiijiyad iyo qorshe ku saabsan sida loo soo jiito karti sare iyo sida aad u haysan karto muddo ka dheer celcelis ahaan waqtiga.
Ka qeybgalayaashu waxay kalfadhiga uga bixi doonaan:
Baadhitaankii ugu dambeeyay ee warshadahaaga ee ku saabsan isbeddelada mustaqbalka ee ku saabsan soo jiidashada iyo haynta kartida ugu sareysa
Fahamka dhabta ah ee hadda jira ee ah helidda iyo haynta dadka wanaagsan stats-ka iyo hab-dhaqanka ugu wanaagsan
Fikradaha curinta ah ee ku saabsan helitaanka dadka saxda ah ee ku habboon warshadahaaga
Fikradaha hal-abuurka ah iyo tusaalooyinka shirkadaha caalamiga ah ee ku guuleysta dagaalka hibada
Tobanka sare 'soo jiidashada' ee waxa karti sare leh ay doonayaan marka ay raadinayaan inay u shaqeeyaan shirkad
Sida loo noqdo shirkad 'soo jiidata' hibada, oo ay kujirto yeelashada hoggaamiyeyaal isbeddello iyo abuurista dhaqan diiradda saaraya hoggaanka wadaagga ah
Sababta koowaad ee ay dadku uga baxaan shaqo-bixiye iyo sida loo xaliyo
Faham weyn oo ah sababta maalgashiga ee shaqaalaysiinta kaligeed loo helo ayaa ah hab aan lagu guuleysan
Xalka hal-abuurka ah ee aad isla meel dhigi karto isla markiiba si aad u kordhiso guulahaaga xagga soo jiidashada iyo haysashada kartida ugu sarreysa
Cheryl Cran waxaa si aad ah ugula taliyay koox kale oo Kaiser ah oo ay la shaqeysay- waxaanna dhawaan shaqaaleysiinay iyada oo ah xiritaanka af-hayeheena keynote ee kulankeena sanadlaha ah - waa ku habboon! Fariinta Cheryl si buuxda ayaa loo habeeyay iyada oo ku saleysan ganacsigeenna, dhagaystayaasheena kala duwan waxayna si qurux badan u xireysay shirkeena
Waxay awood u yeelatay inay ka shaqeyso waxyaabaha ka kooban qaybaha kale ee barnaamijka iyo sidoo kale ay u fiirsato caqabadaha gaarka ah ee dadka ka tirsan kooxdeena ay la macaamilaan oo ay siiyaan fikrado dhiirigelin leh. Nolosha ganacsigeeda iyo waaya-aragnimadeeda iyada oo ay weheliso fahamkeeda dareenka ah iyo gaarsiinta firfircoon ayaa kooxdayada siisay dhiirrigelin waxayna ahayd hab cajiib ah oo lagu soo duubo shirkeena!
Faa'iidooyinka Shaqaalaha Federaalka ee VP
Akhri marqaati kale
Habee u yeer keyword-kaaga
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida Cheryl u habayn karto fure-u-dhigista dhacdadaada xigta nala soo xiriir maanta.
Buug Cheryl si aad ugala Hadasho Dhacdadaada
Noqo geeska hore!
NextMapping ™ waa geedi socodkeena ganacsiga iska leh kaas oo ka caawiya ururada, hogaamiyaasha, kooxaha iyo ganacsatada inay sare u qaadaan awooda ay ku maraan mustaqbalka iyo inay mustaqbalkooda shaqo hada diyaar u yihiin.
Waxaan leenahay baloog qorayaasha martida ah oo ay ku jiraan CIO's, Saynisyahanada Dabeecadda, Maamulaha guud, Aqoonyahannada Xogta oo ay ku jiraan qoraalladii aasaasaha Cheryl Cran.
Faahfaahin dheeraad ah
Mustaqbalka ugu dambeeya ee baaritaanka shaqada iyo xogta.
Adiga iyo shirkadaada mustaqbalka diyaar ma u tihiin? Qaado su'aalahan gaagaaban si aad u ogaato.
Mustaqbalka Shaqooyinka Koorsooyinka
Barashada khadka tooska ah oo ay la socoto ikhtiyaar macalin xulasho hogaamiyaasha si kor loogu qaado xirfadahooda si ay hada diyaar ugu noqdaan.
Waxaan jeclaan lahayn inaanu kaa maqalno
Ku Xiriir Hada
Lacag la'aan: 1.833.NXTMAPP
Nagala soo xiriir bulshada
Xuquuqda daabacaadda Cheryl Cran 2020 | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
U hel xeelado toddobaadle ah si toos ah sanduuqaaga